Olee otú iji lanarị a tonado | Netwọk Mgbasa Ozi
Olee otú iji lanarị a tonado
Tornadoes bụ kemmasi ihu igwe phenomena, ma ha nwekwara ike ịbụ ezigbo mbibi. Ọ bụ ezie na EspañaMaka oge a, naanị ndị nke EF0, EF1, EF2 na ụfọdụ EF3 ka ahụrụ, anyị enweghị ike ichefu nke ahụ ihe egwu di na mbu.
Ya mere, ka anyị mara esi lanarị a tonado.
1 Mba ọzọ
2 N'ime ụlọ
3 Ebe B NOTGH to ịga?
Ọ gaghị ekwe omume ịmara n'oge dị mma ebe oke ikuku mmiri ọzọ ga-amalite. Yabụ, ọ nwere ike iju anyị anya mgbe anyị nọ mba ọzọ. Kedu ihe anyị ga-eme n'okwu a?
Ọ bụrụ na anyị na-anya ụgbọala, ihe anyị ga-eme bụ ịnwa ịchọta ebe obibi dị nso. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịchọta ya, anyị ga-ahụ na anyị nwere eriri eriri - ihe, cheta, bụ iwu - anyị ga-ehulata ka ahụ anyị belata dị ka o kwere mee, anyị ga-atụkwasị aka anyị n'isi.
Ọ bụrụ na anyị na-eje ije, anyị ga-ahụ ebe mgbaba n’ime ala, dị ka olulu.
Ọ bụrụ na anyị na-akwọ ụgbọ mmiri, anyị ga-agagharị n'akụkụ aka nke aka uwe mmiri. Ọ bụrụ na anyị achọpụta na ọ ga-adaba na ụgbọ mmiri ahụ, anyị ga-atụba onwe anyị n'oké osimiri ebe ọ bụ na n'ụzọ a anyị ga-ezere mmerụ ahụ.
Ọ bụrụ na ọ ju anyị anya n'ime ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ anyị, anyị kwesịrị ịga n’otu ọnụ ụlọ ebe windo na-enweghị windo nke dị nso n’etiti ụlọ ahụ. Ọ bụrụ na e nwere okpuru ulo, ọ ga - aka mma. Anyị ga-ehulata n’ala ma jiri aka na ogwe aka kpuchie isi anyị.
Ebe B NOTGH to ịga?
Enwere mpaghara ụfọdụ nwere ike ịdị oke egwu ma na ịghara ịga n'ọnọdụ ọ bụla mgbe oke mmiri ozuzo na-etolite, ha bụ:
Lọ ndị nwere obosara, nke dị larịị, dị ka ụlọ ahịa kọfị ma ọ bụ mgbatị ahụ
Ime ụlọ mepere emepe nwere ọtụtụ windo
Mgbe ọ gafere, anyị ga-akpachara anya pụọ ​​na ndo ma kpọọ ndị ọrụ mberede.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe » Olee otú iji lanarị a tonado
Mgbanwe ihu igwe nwere ike igbu NASA
Matthew Tropical Storm Matthew ghọrọ udi ifufe 2